Apple Tarisa Bluetooth Isiri Kushanda? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Apple Tarisa
foni yangu haina kuwana fitbit yangu
twitter isiri kushanda pa iphone
sei kuwana apple app chitoro
Apple Tarisa Bluetooth Isiri Kushanda? Heino Chikonzero & Iyo Chaiyo Kugadzirisa!
Iwe unoda kubatanidza yako Apple Watch kune chinwiwa cheBluetooth, asi nekuda kwechimwe chikonzero ivo havazobatanidze. Hazvina mhosva kuti iwe unoedza chii, haugone kuita sekunge zvigadzirwa zvako zvinobatana zvisina waya. Muchikamu chino, ini ndinokuratidza zvekuita kana Apple Watch Bluetooth haisi kushanda saka unogona kugadzirisa dambudziko racho zvakanaka !
Kutanga, edza kutangazve yako Apple Watch. Kana diki software glitch iri chikonzero nei Apple Tarisa Bluetooth isiri kushanda, kudzima yako Apple Watch kure uye kudzoka pane kazhinji kunogadzirisa dambudziko.
Dhinda uye ubatisise bhatani repadivi kusvikira iyo 'Power Off' inotsvedza yaonekwa pachiratidziro. Rova zvakasimba icon remagetsi kuruboshwe kurudyi kuyambuka chinotsvedza kudzima Apple Watch yako.
chii chinoshandisa iyo yakawanda data pane iphones
Mirira anenge masekondi makumi matatu, wobva wadzvanya wabata bhatani repadivi zvakare kusvikira logo yeApple yaonekwa pakati pechiso chewachi. Yako Apple Watch inodzoka shure nguva pfupi yapfuura.
Batidza Bluetooth Pane Iyo Imwe Dhizaini
Iko hakuna kuiswa pane yako Apple Watch iyo inogona kudzima Bluetooth. Saka, kana Bluetooth isiri kushanda paApple Watch yako, unogona kunge wakadzima Bluetooth netsaona pane chishandiso chauri kuyedza kubatanidza Apple Watch yako.
kuvhura iphone kana bhatani remagetsi rakatyoka
Kana mudziyo wauri kuyedza kubatanidza kune yako iPhone, vhura iyo Zvirongwa app uye tinya Bluetooth. Ita shuwa kuti switch iripedyo neBluetooth kumusoro kwechiratidziro yakavhurwa (girini uye yakamisikidzwa kurudyi).
Iwe unogona zvakare kuda kuyedza kushandura Bluetooth kure uye kumashure pairi, ingangoitika kuti iwe waishandisa Control Center ku patsanura kubva pamidziyo yeBluetooth kusvika mangwana .
Ita shuwa Kuti Midziyo Yako Iri Mune Range Yeumwe Neumwe
Chimwe chikonzero chakajairika nei Apple Watch Bluetooth isingashande ndeyekuti yako Apple Watch haisi 'iri kure' yechishandiso chaunoda kuibatanidza nayo. Iyo yakajairwa huwandu hweBluetooth michina ingangoita makumi matatu tsoka, asi yako iPhone uye Apple Watch inogona kazhinji kubatana kuburikidza neBluetooth chero bedzi ivo vari mukati memamita mazana matatu emumwe nemumwe.
Nekudaro, kana iwe uchibatanidza yako Apple Watch kune yako iPhone kana imwe kifaa cheBluetooth kwenguva yekutanga, ita shuwa kuti iwe wakabata zvishandiso zvako padyo nepadhuze kuti uve nechokwadi chekubatana kwakachena.
Edza Kubatanidza Yako Apple Tarisa Kune Yakasiyana YeBluetooth Chidimbu
Kana Apple Watch Bluetooth isiri kushanda, dambudziko rinogona kunge riine yako imwe kifaa cheBluetooth uye kwete yako Apple Watch. Kuti uone kuti dambudziko iri kubva kupi chaizvo, edza kubatanidza yako Apple Watch kune zvakasiyana Makaralı mudziyo.
Kana yako Apple Watch ikasabatana chero Zvigadzirwa zveBluetooth, saka pane chakakanganisika neako Apple Watch. Kana yako Apple Watch chete isiri yekubatana neimwe kifaa, saka nyaya iri kuuya kubva kune yako imwe kifaa cheBluetooth, kwete yako Apple Watch .
haikwanise kuona iphone muitunes
Ita shuwa Kuti Yako YeBluetooth Chishandiso Haina Kubatana Nechimwe Chinhu
Izvi zvinoitika kwandiri kazhinji kana ndiri kunzvimbo yekurovedza muviri. Ndinoedza kubatanidza maAirPod angu neApple Watch yangu, asi ivo vanozobatana neangu iPhone pachinzvimbo! Tarisa uone kuti yako kifaa cheBluetooth chakabatana ne iPhone yako, iPad, iPod, kana komputa pane yako Apple Watch.
Kana yako kifaa cheBluetooth ichiramba ichibatanidza kune mamwe madhizaini kunze kweApple Watch yako, edza kudzima Bluetooth pane ako ese mamwe majaira. Nenzira iyi, chishandiso chete icho chinokwanisa kubatanidza kune yako Apple Watch.
Nhanho yedu yekupedzisira yekugadzirisa matambudziko apo Apple Watch Bluetooth isiri kushanda ndeye kudzima zvese zvirimo uye marongero. Izvi zvinopa yako Apple Watch kutanga kwakatsva zvachose uye netarisiro yekugadzirisa dambudziko re software riri kuritadzisa kubatana nemidziyo yeBluetooth.
foni yangu yaisazotamba mavhidhiyo eYouTube
Vhura iyo App yezvirongwa pane yako Apple Watch uye tap General -> Seta -> Bvisa Zvese Zvemukati uye Zvirongwa . Mushure mekusetazve kwapera, uchafanirwa kubatanidza yako Apple Watch kune yako iPhone zvakare sezvawakaita iwe pawakatanga kuiburitsa mubhokisi.
Kugadzirisa Yako Apple Watch
Kana Apple Watch Bluetooth ichiri isiri kushanda, saka unogona kunge uri kusangana nedambudziko rehardware. Zvinogoneka kuti antenna iri mukati meApple Watch yako inoibatanidza neBluetooth yaputswa, kunyanya kana iwe uchangobva kudonhedza Apple Watch yako kana kuiburitsa mumvura. Seta musangano kuApple Chitoro padyo newe uye ita iyo Genius Bar kuti itarise pairi.
Apple Tarisa Bluetooth: Kushanda Zvakare!
Bluetooth iri kushanda zvakare uye iwe unokwanisa pakupedzisira kuenderera uchibatanidza yako Apple Watch nemamwe ma waya asina waya. Inotevera nguva Apple Watch Bluetooth isiri kushanda, iwe unozoziva chete maitiro ekugadzirisa dambudziko! Siya chirevo pasi pazasi kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako Apple Watch.